किन अन्तरजातीय जोडीको हत्या गर्दैछ समाज ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
के आफ्ना सन्तानको खुशी नै आमा बाबुको खुशी हैन र ? यो समाजमा बस्ने हाम्रा दाजुभाई तथा दिदी बहिनिको खुशी नै हामिले हाम्रो खुशी मान्नु पर्ने हैन र ? एउटै डोरीमा झुण्डिएर आत्महत्या गरे विचरा जोडिले । यो समाज पनि कति अच्चमको छ है ! अरुको खुशी लुटि–लुटी आफु हाँस्न खोज्छ ।
जातियताकै नाममा अझै पनि अरुलाई रुवाउने काम गर्छ । भोटे, सार्की, कामी, दमाइ, पोडे, मगर ,मुस्लिम, थारु, मधेसी, जनजाति सबै मानवजाति नै हुन । धनि र गरिव सबै सबै मानिस हैन र ? खासगरी मानिसको सोचमा यस्ता पुरातनवादी विचारधाराले जबसम्म जरा गाडेर बस्छ, तब सम्म यस्ता घटनाहरु बारम्बार दोहोरिरहन्छन । असमानता, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य, समतामूलक, शान्तिपूर्ण र समृद्ध समाज निर्माण आजको आवश्यकता हो । छुवाछुत र भेदभावको प्रथा पहिलेदेखि चली आएको कुप्रथा हो ।
आजको आधुनिक युगमा विज्ञान र प्रविधिले धेरै कुरा बुझाईसकेको भएपनि अझै यस कुप्रथामा विश्वास गर्नेहरू धेरै छन् । यहाँ तल्लो जात माथिलो जात भन्ने कोही छैन । हामी सबैको नकारात्मक सोच अनि रुढीबादी परम्परा हो । धामी –झाँक्री र भूतप्रेत अन्धविश्वासका पात्र हुन । अन्तरजातीय बिहे गरेकै कारण घर मात्र होईन गाउँ निकाला अझै पनि भैरहेका छन् । यदाकदा प्रेममार्फत समाजमा अन्तरजातीय वैवाहिक सम्वन्ध स्थापित हुने गरेपनि पूर्णरुपमा अन्तरजातीय विवाहले मान्यता नपाउँदा आत्महत्यासम्मका घटना समाजमा घट्ने गरेका छन् । यसकै पछिल्लो उदाहरण हो – झापाको कनकाई नगरपालिका–६ निवासी अस्मिता तोलामी सार्की र सोही ठाउँका ईश्वर भट्टराईको आत्महत्या पनि ।
आत्महत्या गरेका उनीहरु अङ्गालोमा बाँधिएर झुण्डिएको खबरले अहिले त्यस्तै अन्य जोडिहरुमा एक किसिमको त्रास फैलाएको छ । सदियौँदेखी उत्पीडनमा रहेका दलित समुदायलाई वास्तविक रुपमै कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ भनेर अब गहिरो र विस्तृत छलफल चलाउन जरुरी छ । आफु भन्दा तल्लोजातकी केटीलाई विवाह गरेको भन्दै परिवार र आफन्तले गाउँ निकाला गर्ने क्रम अझैपनि रोकिएको छैन ।
राज्यका निकाय, राजनीतिक दल, मानवअधिकारवादी, अब ‘जीवन सुरक्षा र घरमा निर्धक्कसँग बस्न पाउने वातावरण बनाइ दिन जरुरी छ । हो अब यस्ता प्रेमिल जोडीलाई निर्धक्कसँग जिउने वातावरण बनाइदिन यस सग सम्बन्धित सबैपक्षले सोच्नुपर्ने समय आएको छ । समस्यालाई कानुनको प्रयोगभन्दा पनि जातीय सद्भाव कायम गर्नेगरी सबैले सहयोग गर्नुपर्ने समय भैसकेको छ । प्रेम विवाह गरेका अन्तरजातीय जोडीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुको विकल्पमा छुवाछुत कसुर ऐन २०६८ विपरीत सुरक्षा निकायले समेत बेवास्ता गर्नु कति सम्मको लम्पसारवाद हो ? अझैपनि अन्तरजातीय विवाहित जोडीलाई घरबाट अमानवीय व्यवहार गरी गाउ निकाला गरेको दलित खबर बेलाबेलामा आइरहेकै छ ।
घर – परीवार तथा छिमेकीले धर्म र संस्कार विपरीत भन्दै अमानवीय ब्यवहार गर्ने परम्पराको अब जरा उखेल्नै पर्छ । आखिर किन ? राज्य संयन्त्रहरु छुवाछूतका घटनालाई मलजल गरिरहेको छ किन दलितमाथिको थिचोमिचोमा राज्य संयन्त्र मुकदर्शक अवस्थामा छन् ।